Làlan'ny sidina Voyager I sy II -
Làlan'ny sidina Voyager I sy II
Pejy Misiônera Spacecraft
Marinera 2 Mpisava lalana & Voyager Tsangatsangana Galileo Cassini-Huygens
Rosetta Messenger mangiran-dratsy Horizons Vaovao Juno
Fitsidihana an-tsehatra amin'ny sidina ny sambon-danitra 1 sy 2 voyager
Nanomboka tamin'ny faramparan'ny taona fitopolo, nitsidika an'i Jupiter, Saturn, Uranus ary Neptune ny sambon-dranomasina ary nanohy ny toerana misy azy ireo ankehitriny.
Samy velona ny sambon-danitra ary nandao ny tontolon'ny masoandro izao. Voyager 1 dia nanao izany tamin'ny 25 Aogositra 2012 ary ny Voyager 2 dia nanaraka ny 5 Novambra, 2018. Izy ireo ihany no sambon-danitra mitrandraka ny habakabaka. Andininy.
dikan'ny taonan'ny kisoa
Tamin'ny volana desambra 2017, noroahana voalohany ny fanondranana fanitsiana làlan-kaleha (TCM) tao amin'ny Voyager 1 tao anatin'ny 37 taona mba hanomezana vahana ny torolàlana ara-dalàna ny firoboroboan'ny sambon-danitra. Andininy .
Ny sary mihetsika etsy ambony dia milalao nanomboka tamin'ny 1977, fa raha te hijery azy indray ianao - avereno fotsiny ny fotoana (ampiasao ilay slider ambony izay misy fifehezana tsara sy maditra) miverina amin'ny 1977 rehefa natomboka ireo mpitsangatsangana. Amin'ny alàlan'ny fandrosoana indray dia azonao atao ny mijery ny sambon-danitra miala amin'ny tany ary mitsidika ireo planeta. Ny Voyagers no sambon-danitra voalohany nitsidika an'i Uranus sy Neptune ary nampiasa valan-tsarety avy any Jupiter sy Saturn mba hampiakarana ny hafainganan'izy ireo. Izy io dia sombin-tsarimihetsika nahagaga.
Ny rindranasa dia manana fiasa zomoma mandeha ho azy hanomezana fahitana mirindra ny sambon-danitra amin'ny fotoana rehetra, fa azonao atao ny mizaha sy mivoaka amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso zoom. Ny angona momba ny lalan'ny sidina dia nalaina mivantana avy Tranonkala JPL an'ny NASA .
Raha avelanao hihazakazaka ankehitriny ny sary mihetsika, dia toa lavitra be ilay sambon-danitra. Na izany aza, lavitra noho ny fisehoany ireo. Izany dia satria tsy misy fijerena drafitra fotsiny io simulation io fa ny sambon-danitra roa dia nalefa ivelan'ny fiaramanidina fanakona-tany tamin'ny fihaonan'izy ireo farany tamin'ny planeta. Midika izany fa ny Vogager 1 dia elanelana kely ambonin'ny fiaramanidina (oh: manakaiky kokoa ny mpijery) ary ny voyager 2 dia elanelana kely eo ambanin'ny fiaramanidina. Azonao atao ny mahita ny fiandohan'ireo fiviliana ireo amin'ity video manaraka ity.
Ny mpitsangatsangana tsirairay dia mitondra hafatra avy amin'ny tany, a firaketana volamena izay misy sary sy feo ho enti-miarahaba ireo endrika fiainana ivelan'ny terestrialy izay mety hahita ny fanadihadiana amin'ny ho avy.
Ny dian'ny Voyager 2 mamakivaky ny Jupiter System dia azo jerena amin'ny antsipiriany kokoa amin'ity horonantsary youtube ity .
Fanazavana feno momba ny iraka iray manontolo no tototry ity horonantsary 15 minitra ity.
Raha te-hamaky bebe kokoa momba ny iraka Voyager ianao, ary ny zavatra hitan'izy ireo, ny fiatombohana tsara indrindra angamba dia ireo Voyager Spacecraft pejy amin'ny wikipedia.
vehivavy scorpio sy taurus lehilahy eo am-pandriana
lehilahy capricorn sy vehivavy pisces amin'ny fitiavana
homamiadana lahy scorpio vehivavy eo am-pandriana
vehivavy scorpio eo am-pandriana pisces lehilahy
lehilahy homamiadana sy vehivavy libra eo am-pandriana